မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: မင်းလားကွမြန်မာ “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
အခြေအနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင်.ပြည်ပကိုရောက်နေပေမယ်.အိမ်ကိုလွမ်းမိတာ ကတော.အကြိမ်ကြိမ်ပါပဲ၊အိမ်ကိုပြန်ချင်တာကတော.အမှန်ပါ၊ဒါပေမဲ.အခြေအနေမပေးသေးတာကြောင်.လဲမျိုသိပ် ကြိတ်မှိတ်ပြီးနေနေရတာပေါ.ဗျာ၊ တခါတလေစဉ်းစားမိရင်ဘယ်သူ.ကိုစိတ်ဆိုးလို.စိတ်ဆိုးရ မှန်းတောင် မသိတော.ပါဘူး။ဘဲဥအစရှာမရသလိုမျိုးပေါ.၊ ဒါပေမယ်.မြန်မာပြည်ကိုတော.ချစ်သေးတာ အမှန်ပါပဲ။တချို.မြန်မာပြည်ကိုသူများတိုင်းပြည်တွေနဲ.ယှဉ်ပြီးနှိမ်.ချတဲ.စကားပြောလာရင် မခံမရပ်နိုင်အောင် ဖြစ်မိတာအမှန်ပါပဲ၊ မြန်မာပြည် မကောင်းမှန်းသိပေမယ်.နှိမ်ပြောပြောတာကိုလက်မခံနိုင်အောင် ဖြစ်မိတယ်၊ ဒါနဲ.ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံသားတယောက်နဲ.ဆက်စပ်ပြီးတော.ပြောကြရင်းနဲ.ဒါလေးရေးဖြစ်သွားတာပါ၊
သူကစပြီးမင်းဘာလူမျိူးလဲလို.မေးလာလို့ ငါမြန်မာကွ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်၊ကိုယ်.ကိုကိုယ်တော.တခြားလူမျိုးလို့ တော.မလိမ်ပြောနိုင်ပါ၊
သူက သြော်မြန်မာကိုးဆိုပြီးအထင်သေးသလိုနဲ.ကြည်.ပြီးဆက်မေးပါတယ်၊ မင်းတို.လူမျိုးတွေဒီမှာ တော်တော်များတယ်နော်လို.ရှုံ.ချချင်သလိုနဲ.ပြောလာပါတယ်
တချို.ကမြန်မာလို.ပြောလိုက်ရင်အထင်သေးသလိုလို.နဲ.၊နလပိန်းကောင်တွေလို.များထင်နေကြလားမသိ၊ သူကိုပြန်ရှင်းပြရပါတယ်၊ငါတို.မြန်မာတွေကိုပညာမတတ်တဲ.ကောင်တွေ၊ဗဟုသုတမရှိတဲ.ကောင်တွေလို.များမင်းတို.ထင်နေသလား၊မြန်မာပြည်သားတွေဟာအခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင်.တိုင်းတပါးကို ထွက်လာကြ ပေမယ်.အောက်တန်းတော.မကျသေးပါဘူး။ မင်းတို.အလုပ်ယှဉ်လုပ်ကြည်.၊မြန်မာဆိုတာ တလက်မပြရင် ကမ္ဘာတခုလုံးတောင်မြင်တဲ.ကောင်တွေကွ၊ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးမှာလဲအကုန်ထက်ပြီးသား၊လူတော်တွေလို.ပြန်ပြောလိုက်ရင်းဒါဆိုဘာလို.ငါတို.နိုင်ငံအလုပ်လာလုပ်နေသေးလဲ၊မြန်မာပြည်ပြန်ပါလားလို.ပြန်ပြောခံရပါတယ်၊ အဲဒီအခါကိုယ်ကလဲအောက်ကျမခံဟငါတို.နိုင်ငံကပညာတတ်တွေပေါများပြီး ပေးစရာအလုပ်ရှားလို.ပေါ.ကွ၊ ပြီးတော.မြန်မာပြည်အစိုးရအကြောင်းလဲမင်းတို.သိသားပဲ၊သူတို.တွေက
အသုံးမှမကျပဲ။ အတင်းအစိုးရဝင်လုပ်နေတာကွ၊ လူတွေကိုကြောက်အောင်အကြောက် တရားပေါင်းစုံနဲ.အုပ်ချုပ်နေတာ၊ ငါတို.တွေအတွက် ဘယ်လိုမှမကောင်းလို.နိုင်ငံခြားကိုထွက်လာရတာပေါ.လို.ရှင်းရှင်းလေး ပြန်ပြောလိုက် ပါတယ်၊
ဒါပေမယ်.အခုတော.လူညံ.တွေဖြစ်သွားကြပြီ၊မင်းတို.မှားမှားမှန်မှန်သူများ တိုင်းပြည်မှာ အလုပ်အကိုင်လာ လုပ်ကြရတယ်ဆိုကတည်းက မင်းတို.ညံ.လို.ပေါ.ကွ၊မင်းတို.မှမတော်လှန်နိုင်ကြတာ၊၊မင်းတို.နဲ.ထိုက်တန်တဲ.
အစိုးရပဲမင်းတို.ရမှာပေါ.ကွာ။မင်းတို.မှမညီညွတ်ကြတာ၊မင်းတို.မှာခေါင်းဆောင် နိုင်တဲ.အရည်အချင်းရှိတဲ.သူရှိနေတာပဲ၊အောင်ဆန်းစုကြည်လေကွာ၊သူ.ကိုဆို တကမ္ဘာလုံးကခေါင်းဆောင်တွေကအစလေးစားကြတာ၊
အမေရိကန်သမ္မတကတောင်သူရဲ့ သူရဲကောင်းပါလို.ပြောထားတာ၊နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုခံထားရတာ နည်းတဲ.အရည်အချင်းလား၊ဒါပေမယ်.ငါမြင်တာကို
အစိုးရနဲ.တကယ်တမ်းသာဆက်ဆံရမယ်ဆိုရင်ဖားချုင်တဲ.ကောင်တွေများတယ်၊ အစိုးရမကောင်းကြောင်း နောက်ကွယ်မှာပြောပြီး၊ရှေ.ရောက်ရင်ခေါင်းညိတ်ပြီး yes man တွေကြီးပဲ၊ပြီးတော.ကိုယ်.အတ္တထက်ပိုပြီး ဘာကိုမှ ဦးစားမပေးတတ်ကြဘူး၊
ဒါမှအာဏာရှင်ကိုမင်းတို.အနိုင်ရမှာပေါ.ကွာ၊မင်းတို.တိုင်းပြည်ကလူတော်တွေထွက်တဲ. တိုင်းပြည်ဆိုတာ ငါမငြင်းပါဘူး၊ဒါပေမယ်.စိတ်ဓာတ်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော.ခံနိုင်ရည်မရှိကြတာများတယ်၊ ဒါတောင်မင်းတို.အောင်ဆန်းစုကြည်လိုမိန်းမတယောက်ရှိနေလို.ဒီလောက်အထိဖြစ်နေတာ၊ သူသာမရှိရင်မြန်မာပြည်မြေပုံတောင် မင်းတို.ပြန်ဆွဲကြရမယ်.
ကိန်းပါပဲ။ဘာလို.လဲဆိုတော.မြန်မာပြည်ဆိုတာဘယ်သူမှသိကြမှာမဟုတ်တော.လို.ပဲကွ၊ အင်းကျနော်ကသူ.ကိုဇာတိမာန်နဲ.ပြန်ပြောတာအခုတော.သူကအလုံးလိုက်ပစ်ထက်လိုက် တဲ.စကားများကြားမှာ အလူးအလဲ ပြန်ပြောနိုင်စွမ်း တောင်မရှိတော.ပါဘူး၊
အိမ်ရောက်တော.ရေချိုးရင်းမှန်ကြည်.မိတော.ကိုယ်.ကိုကိုယ်ပြန်မကြည်.ချင် လောက်အောင်ကို ရှက်သွားမိပါတော.တယ်၊
မင်းလားကွ မြန်မာ ဆိုပြီးတွေးပြီး ကြည့်မိနေပါတော.တယ်၊
Posted by အာဇာနည် at 10:38 PM